भैंसी चोरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका थुनुवा रानाको मृत्यु ! - krishipost.com
भैंसी चोरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका थुनुवा रानाको मृत्यु !
धनगढी, २५ असोज ।
कैलालीको टीकापुरस्थित प्रहरी हिरासतमा एकजना थुनुवाको मृत्यु भएको छ ।
भैंसी चोरेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा राखिएका सुर्खेतको चौकुने गाउँपलिका-३ वेतान बस्ने ३५ वर्षीय धनबहादुर रानाको हिरासतभित्रै मृत्यु भएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रतीक विष्टले रानालाई हिरासतभित्र रहेको शौचालयमा झुण्डिएकाे अवस्थामा फेला परेको बताए । शौचालयको भेन्टिलेसनको जाली च्यातेर झ्यालको सरियामा गञ्जीको डोरी बनाई रानाले आत्महत्या गरेको प्रहरी नायव उपरिक्षक विष्टले बताए ।
मृतक रानालाई कैलालीको जानकरी गाउँपालिका-१ का पुलराम थारुको भैंसी चोरेको आरोपमा आफन्तले दिएको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
विचौलिया कम गर्न कृषि हाट बजार सञ्चालन !
बागलुङ बजारमा कृषि हात तथा थोक बजार सञ्चालन गरिएको छ । कृषि ज्ञानकेन्द्र बागलुङ नगरपालिका र उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा बागलुङ नगरपालिका –३ गुठीमा हाट बजार सञ्चालन गरिएको हो ।
हाट बजार सञ्चालनमा आएपछि कृषीले सिधै उपभोक्तासँग पहुँच पुर्‍याउने छन् । उपभोक्ताले बजार मूल्यभन्दा केही सस्तो दरमा उपभोग्य सामग्री खरिद गर्न पाउनेछन् । विचौलियाको कारण कृषक र उपभोक्ता दुवै मर्कामा पर्दै आएका छन् ।
हाट बजारको सुभारम्भपछि बोल्दै बागलुङ नगरपालिकाका मेयर जनकराज पौडेलले विचौलियाको मारमा परेका कृषक र उपभोक्तालाई हाट बजारले राहत मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
हरेक हप्ताको शनिबार कृषि हाट बजार लाग्ने छ । अन्य बारमा थोक तथा खुद्रा व्यापारको लागि सटर भाडामा दिने हाट तथा थोक बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरबहादुर थापाले बताए । समितिले हरेक दिन फलफूल तथा तरकारीको मूल्य तोक्नेछ ।
हाट बजारको भौतिक संरचना निर्माणको लागि बागलुङ नगरपालिकाले पहिलो चरणमा पाँच लाख, दोस्रो चरणमा तीन लाख र कृषी ज्ञान केन्द्रले साढे छ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको अध्यक्ष थापाले बताए । नगरपालिकाले जग्गाको मासिक १५ हजार रुपियाँ भाडा तिर्दै आएको छ । गत वर्षदेखि सुरु भएको हाट बजारमा कोरोनाको लागि नियमित कारोबार हुन सकेको थिएन ।
दुई हजार वर्गफिटमा १० कक्ष रहने गरी सटर निर्माण गरिएको छ । जग्गा आगामी पाँच वर्षसम्मको लागि भाडामा सम्झौता भएको छ । हाट बजारमा कृषि उपज विक्री गर्ने कृषकले सटर भाडामा लिनुपर्नेछ ।